Maarkoos qaybta koowaad – Akhbaarta Wanaagsan
Posted on August 6, 2016 October 12, 2016 by Maroodiga
Magac Ciise maxaa laga wadaa?
Maarkos Cutubyada 1-8
Injiilka Ilaah Sida uu Maarkoos u qoray, waa buugga labaad ee afarta buug ee kitaabka quduuska ah ee ka hadlaaya nolosha Ciise Masiix. Mu`min la odhan jiray Yoxaanaa, Maarkoos ayaa qoray intii u dhaxaysay AD42 iyo AD44, sanado badan kadib markii iskutilaabta lagu qodbay Ciise Masiix uuna ka sarakacay. Wuxuu ka bartay Butroos waxyaabihii Ciise Masiix yidhi ama sameeyeyba. Butroos wuxuu ahaa mid xerta ka mid ahaa, amaba raacsanaa Ciise Masiix.
Maarkoos wuxuu wax ka bartay oo ka dhigtay Markii Butroos wax barayay iyo markii uu wacdinayayba. Waxyaabahaani waxay ka dhaceen Judeeya iyo Galiili, halkaas oo aan hadda ugu wacno Israaiil. Buuga Maarkoos wuxuu badanaa wax nooga sheegaa arrimo kusaabsan todobaadkii ugu dambeeyey intii aan Ciise Masiix iskutaalabta lagu qodbin oo uusan ku dhiman halkaas. Wuxuu kaloo kudhamaadaa marki Ciise Masiix soo noolaaday oo uu geerida kasara kacay. Uuna kulaabtay oo aaday xagga janada ee aabihiisa, Illaah. Illaah magaciisa luuqada cimraaniyada waa Yahweh. Waa halka iyo midka keliya ee yahuuda iyo masiixiyiintuba ay caabudaan. Wiilkiisu waa Ciise, Masiixa. Nebbiga Illaah iyo badbaadiyaha dunida, wuxuu dhashay 2000 sanno ka hor wuxuuna ka dhashay gaber yahuud ah oo Maryan layidhaahdo.
Sideeda cutub ee ugu horeeya injiilka kitaabka Maarkoos waxay noo sheegaan, qaybihii ugu horeeyey ee shaqooyinkii Ciise Masiix, ee wax barida iyo caafinta ahayd, akhbaarta wanaagsani waxay tahay Illlaah inuu aad inoo jecelyahay, taasna wuxuu ku muujiyey inuu wiilkiisii madiga ahaay inoo soo diray. Ciise, si uu inoogu dhinto anaga daraadeen. Ciise wuxuu dusha saartay ciqaabteenii ay ahayd inaan u dhimano dambigeena awgii, si aan u badbaadno. Waa badbaadiyaheena. Dad kasta oo illaah caabudo aaminana Ciise Masiix waxay la qaadan doonaan nolosha daa`imka ah.
Yahuudu waxay ciise ugu yeeraan Yashuuca taasoo macnaheedu yahay, Badbaado, badbaadadii Yahweh.
Posted in All resourcesTagged Badbaado, Ciise Masiix